Lily James akabatanidzwa kune wake akaroora-nyeredzi, mukadzi wake 'akapererwa' - Nhau
Kuru Blog Varaidzo Style Macelebs
Lily James akabatanidzwa kune wake akaroora-nyeredzi, mukadzi wake 'akapererwa'
Nyaya dzerudo dzakatanga kukomberedza Lily James uye iye 'Wekutsvaka Rudo' shamwari-nyeredzi Dominic West… Dambudziko chete: akaroora, uye mukadzi anonzi anonzi 'apererwa.'
Musi waGumiguru 11, The Daily Mail yakaburitsa mapikicha anoratidza vaviri vacho vachitsvanzvadzira pamusoro pekudya kwemasikati muRome, uko kwavo mini-nhepfenyuro iri kutorwa mifananidzo, uye kuongorora guta pane yakagovaniswa magetsi sikuta. Mumwe mufananidzo unoratidza Dominic achipuruzira musoro waLily; mumwe anomuratidza achitsvoda mutsipa wake.
Nepo dzimwe nhengo dze-mu-yekugadzira mini-dzakateerana dzakabatana neiyo duo yekudya kwemasikati, ivo vaiita kunge vakabatanidzwa kumusoro uye kunze kweguta, ruoko rwake kazhinji rwuri kumashure kwe'Mamma Mia 'nyeredzi.
christina pamhenderekedzo mukomana
Mumifananidzo yaDominic naLily, haana kupfeka rin'i yemuchato.
Richard Mudiki / Shutterstock
Pamusoro pezvo, sosi yakaudza The Daily Mail kuti Dominic, 50, naLily, makore makumi matatu nemasere, vakapedza husiku huviri mune yekudyidzana suite kuHotel De La Ville, iyo inopa panoramic maonero eRoma uye iri padanho nhanho dzinozivikanwa dzeSpanish.
Pakaburitswa mifananidzo iyi, zvaisazivikanwa kana Dominic nemukadzi wake wemakore gumi, muIrish landscape designer Catherine FitzGerald, vakaparadzaniswa, sezvo vanga vasina kuzivisa kupatsana. Nekudaro, Gumiguru 12, The Daily Mail yakati Catherine, uyo Dominic anogovera vana vana, 'akashungurudzika' nekuti aifunga kuti vane 'muchato wakanaka.'
'Catherine aona mifananidzo uye apererwa. Ndakauya kuzotaura naye nekukurumidza pandakaziva nezvavo, 'sosi yakati. 'Catherine anga achiedza kutaura naDominic asi haasi kudaira foni yake. Anovhunduka chose nekuti anga asingazive kuti chii chaiitika. Vakanga vari pamwe chete, saka izvi hazvisi zvachose kubva mubhuruu. '
'Akafunga kuti vaive nemuchato wakanaka uye izvozvi zvimwe zvapera. Ndiwo manzwiro aari kuita izvozvi asi vaviri vacho vanofanirwa kutaura asi parizvino, akarasika nemashoko, 'sosi yakaenderera mberi.
Rimwe bhuku rakati, 'Catherine akarwadziwa paakaona iwo mapikicha uye vakatisiyawo tichinzwa kupera simba. Zvinokatyamadza chose kwatiri tese tinovaziva. '
Chinyorwa chechitatu chakawedzera, 'Kutaura kuti [Catherine] ari kushamisika kungave kuri kutaura. Anorwadziwa uye haana kana chekutaura paruzhinji. Anoda kusiiwa ari ega uye kuwana nguva yekuva ega. '
Dominic, uyo akashamisa nyeredzi mu 'The Affair,' naCatherine vakanga vasina kutorwa mifananidzo pamwe chete pachena kubva kutanga kwa2019, zvichitungamira vazhinji vari kunze kwedenderedzwa ravo remukati kuti vazvibvunze kana vapatsanuka, izvo zvaive zvisiri izvo.
Lily nguva pfupi yadarika akapedza makore mashanu abva-uye-pakudanana neiye 'The Crown' mutambi Matt Smith.
`` Vakatenderera gore rino vachiedza kugadzirisa zvinhu pakati pavo nekuti vese vane rudo rukuru kune mumwe nemumwe, '' sosi yakaudza Zuva Zuva svondo rapfuura. 'Asi zvinosuruvarisa kuti hazvisi kushanda uye vese vafunga kungovhara chitsauko ichi chehupenyu hwavo.
Pakutanga gore rino aive akabatanidzwawo kune Chris Evans .
'Stranger Zvinhu' nyeredzi kudanana kwaDavid Harbour naLily Allen kunopisa
sei kuwana muviri senge blac chyna
selena gomez akashama pa instagram